५ पढ्नै पर्ने पुस्तकहरु - HamroBuzz
by iGuffadi August 7, 2018, 3:28 pm in Entertainment
१ . अरेस्टिंग गड इन काठमाडु
अरेस्टिंग गड इन काठमाडु नेपाली -अमेरिकन लेखक सम्राट उपाध्याय ले लेखेका हुन्। पश्चिम मा नेपाली लेखक द्वारा अंग्रेजी मा लेखिएको यो नै पहिलो पुस्तक हो। यो ९ वटा काठमांडू को दैनिक सेरोफेरोको झलक दिने छोटो कथाहरु को संग्रह हो। उक्त पुस्तक ले उत्कृस्ट ढंग बाट इछ्या र अध्यात्म को प्रकृति को खोज गरेको छ। यदि कथाहरुको सौखिन हुनुहुन्छ भने यो पुस्तक तपाइको पढ्नै पर्ने कथाको क्रममा राख्न सक्नु हुन्छ।
२ .अन्तर्मनको यात्रा
अन्तर्मनको यात्रा यसका लेखक जगदीश घिमिरे को जीवन मा आधारित कथा हो। पुस्तकले उत्कृस्ट ढंग मा लेखक को बालापन देखि पुस्तक लेखुन्जेल सम्म को यात्रा लाइ प्रस्तुत गरिएको छ। पुस्तक पढ्दा आम पाठक लाइ यो जीवनकथा भन्दा पनि बढी कुनै रोमाचक फिल्म जस्तो लाग्छ जसमा नायक को जीवन धेरै उतार चडाव हासो रोदन ले भरिएको हुन्छ। पुस्तकमा नेपालको संघ संगठन को व्यवस्थापन सबन्धि थुप्रै कुराहरु छन् जसले पाठकलाइ धेरै नै फाइदा पुराउन सक्छ।
३ .जीवन काडा कि फूल
जीवन काडा कि फूल उपन्यास शैली मा लेखिएको जीवन कथा हो। जसमा लेखिका झमक कुमारी घिमिरे ले आफ्नो जीवनमा पढ्न र लेख्न को लागि भोगेका अफ्ठ्यारा र जटिल बाटाहरुको वर्णन गरेकी छन्। लेखिका झमक कुमारी घिमिरे मदन पुरस्कार बिजेता पनि हुन्। उनि जन्मजात अपांगता बाट पिडित भएका कारण नेपाली समाज ले उनले पढ्ने लेख्ने कुरा गर्दा गरेको असहयोगहरुको वर्णन पनि यस पुस्तक मा गरेकी छन्। पुस्तक एकदमै प्रेरणा दायक रहेको छ।
४. फूलको आँखामा
आनी छोयिंग डोल्मा द्वारा लिखित उनकै जीवन मा आधारित जीवनकथा हो फूल को आँखामा। आनी ले यसै शिर्षकमा गीत पनि गाएकी छन्। यस पुस्तक ले आनीलाई नजिक बाट नियाल्न सहयोग गर्दछ।
५ चिना हराएको मान्छे
हास्य कलाकार हरिबंश आचार्य को जीवन मा आधारित यो पुस्तकमा तपाइले हरिबंश लाइ राम्रो संग चिन्न सक्नु हुन्छा। उपन्यास शैली मा लेखिएको यस जीवनकथा मा हरिबंश आचार्य को जीवनका प्रत्यक उतार चडाव लाइ उत्कृस्ट ढंगमा बर्णन गरिएको छ। जीवनमा केहि गर्छु भन्ने को लागि यो किताब प्रेरणा हुन सक्छ।
Previous article आखाले बयान गर्छ तपाइको स्वास्थ्य
Next article अदुवाका केहि जान्नुपर्ने फाइदा हरु